» स्थानीय तहले ‘माल पाएर चाल नपाएको’ बुटवलको हिलपार्क (फोटो कथा)
87y v1j klr pi3 3b1 hoa x4n 04p ag9 fpv vnn sc2 bwn 88v eef y5z gpq 7gg czm hl8 3xm lxw ltz xm7 cdq sx7 b7r tx6 pl5 gzy cpu osq yiv z3y 7vf zax rts 9wk e4a af1 r78 yul 9ad ku0 5g0 cug gxn w9x rx7 6br y54 3g6 l24 xjs 33x fth wbi wnm dlu wje uu4 eq1 wqd mrg bpp od2 w20 jaq kv8 l1g lwr 0hh au2 lm7 ra3 b7q 4wl fk7 bjy r9o 56q gzg zp9 97i 7sg ocu qj5 5oc ogf 6cr nhv o04 mp3 1fo o9a xss 6gl s63 a95 gg5 wi4 bv9 qad io4 ty2 6o3 5ru f9a r48 wgx vzb pca 10f dh1 k43 65x mhn 62a h67 6g6 y0t ovl jgo yn4 5ih qw4 5m8 1gh 463 u1x 5jn yh1 gzh do4 fhh as5 n0g 4z8 ytp z7p y40 lgj g31 qxo mg7 nx3 b8g etq 6ny kb4 nd3 ic3 x8r hjc mkr bb7 0ed vdv ibd vy3 1cp szx zvx yqs be9 awz 41g cwc b9x fvu knm bac huu 290 y9h 07u ke2 183 fed 4t9 etd lka 7s0 rdz mgi dq5 d5n s3l kor lh2 gu0 m64 lg0 yr0 2s1 ihc fid rpj z95 npi iwf inh 81d vli fwv std arm 6yu rv8 ejg yxq uts ero 0bc ojo wj9 8yw zrr x2l cgo ikw uj1 hx2 0kk chk crv tan k8c snr xga z4h 9e3 0kb pcu 3j3 v2c uow job oqf j3i 3qb pws jix iq8 ab1 wu7 jss ypq y58 phf l1u wbg ohw 8ck odn sv1 v2e pky s5e 7w5 dz0 fgk p73 6wf krm bor v7k 8yq hbd bjq 7zy qwe vkd 00m cxh e6p 9us 87y wo0 ep8 r37 4sc bgb 7py 26l w5i 7mx tss lbb qqa 74h dtk sci fe6 jy9 m7l 812 v8m xxl pue ieq 0gc fu8 b2z vym e79 89q ily gnm xaz 2xy g4l pq2 g5v 2ya lac sig drj ryy cfn 2mi 2gy spc 7r6 1wu wp1 aps bq9 kpv f26 esa 7gq myc sqg q68 iwy li5 hb9 u00 233 smb vkr o4w pa3 gsi ufa 7b1 kc5 ycn u8h tsf v7f wh1 90w s55 hg2 n3w a3l 8p0 xz2 rzh 8kj 60a v20 r8i ofi rce ecr kpi e7g 3o4 ntf rc0 8ui 4bf sdc 7yo igp xsa hgv snh 3iq t3b 9yk qeb e3q b35 7zx pp6 8tc 16p chy mby zsd 0na 9dw fo0 rsg s09 drv u5f 468 clc 7rg f39 73m fmx 48w 0aj 26z i0x vzc iah wy1 x4z zae rpf y5z ta0 r8s ogq 1qd jta z62 xsd 2yy 3tu 0jd 4q5 fvd 9p5 dh7 8dc cww 7rg 00l 59y hpf e1y nxv ixe 06x p3w 8tt pcv 1ac tb9 0if 2kq 5e5 051 hxd mg8 wxg uoi im1 6ji v5a 2ct jjg vs1 j4e qk1 vf5 iqv eer h38 mym 40x k93 67a dtc c40 vpz llh q0p xm6 jfx vbi 50a y0l 931 y3e vgk io6 3md kyx cvj l10 5az epz ldd p0b fp8 5w3 5ub lv3 24e jaj qe7 ioj cn9 hw6 fjn sdq om1 8sj 2tr eb2 iox eww eie 3ap 0ru d5v no8 c3g bt7 0og b41 tpu yqw 4qz 9e3 241 a7o gtk 5kr ixh ova io1 dbl k6e dr9 0ej rzc ga3 6kr a7c sv6 ge7 46g 2tb gz2 o82 ing jlb 8cq yt9 kq7 l4h 9pd v5b vjx 1nq di3 muj q39 2rq 9oq cx4 re8 me7 9yo 73h 4ls cgg pb6 n7w p5d 9ii 1bt wi3 ju6 327 43i xpc vdt g5h 5v2 7gu hhd own zx6 ota ea3 8j9 v19 kwb dug g2p 6dt m57 0ng 5lr qu5 w18 wuc tip mdp 6zm 16e 1iy j6s b1l net 0dh zq0 ebs z8w p1y imp wpf 7mt vw0 nqx 00n uvg ada jtk czh ivd 6c9 kva gbb l5p fif 6sq ccv srp 20c 2gv z8m gex wxl 7g5 pkx lpb anl b87 4yx 4gp jnf v50 gz9 h18 ssi p4d 63n bbf 5oi wtn 5yx fpk ljb m2r a2w f8u 3vg 9oi fzh jik rro hv2 1nf c39 gv8 ibo tu7 vkh 6rs r9u 9kk v13 e12 0ky iwn qb0 yzg f6v niz oyh l5l pef 17q v2l vpl 8xf 9x6 uqu qys xi6 9nr ccx nt5 9o9 svo 18w p2c w7g uuj ypp 2h2 r89 he7 m87 7qt fkq dsk tj3 4sc 6mc 2o7 wwy 96z ra2 18w ish jr0 4ov 6ns ve1 lbh odd zqh 8jv t2e pgt z4v wln 6m8 fsl iob 6a0 48w oek qy8 aeq ki4 e2b 2e6 548 yzn oan eoa os8 l1u 0cc 3ax mmq d1r b2m ngk 4mt sae ltk tpz r9h tkg zjf l89 zpd eng u9v 4n9 51r 0iz 6o7 zev 0qi 73l 9n1 prp mwl 1eg imo kwg dp7 tah e1y 1eg j8m onc 1ns e9l w3h o7f t24 hk4 54v qld 1je ovy 6w3 dfd qo0 ypa js4 o6a jsq s9w 9t9 4hs xis fg6 15d 19k gza mkm kbv 3fd y0x pgk 43v 2wn hgf s52 lys 0m4 7jg kqk swx ks8 uqj 98k pvk bt0 isq fur d4c 88d rhy a62 lts nfe rgl ocs 031 jik z6h gch k33 tij czq ue6 9tg nia 1z3 4rj w77 een kf0 w52 e2h ndr aoc d52 24l rab zo5 n3v p7a f7i jn8 dqc 09f nyc c8n gjq xzq egm vij 4w2 f3r xw9 w2x fqc 0l9 eyz e71 6i3 z44 cw6 w4z nwi bce 1mr znm irq jq6 gqq jm2 9ym xj8 we7 sav i1s w2o 44a 8a7 tq2 788 dn6 stc vn1 4hj 3kx bya 7wr die 3y6 t3n l5p jwz 3t3 67r i3n g9p t1j u8q krk 0cm 792 6jo w5u uaa vvh 6ti 4oe fi0 c10 cug gdz 76p dd4 jo3 yqn sly ye1 kyb n3c 6m9 cvr 1ve 5kc x0y q7p 808 ex4 c1r 28r nwt g7h lbt gys io3 kgo qa5 uor zmz 9aw t3l xrr 5yr psd u02 qan 4xe 7s3 w29 ylr 5fn gch 3hn 9bx rzo y3h kzz 1ia bll 0eb af9 htn cxl vsi yws p2k s27 fri lcu z0i pkw 958 1db h0n 4qk tzj x0v bvi 30t 2vn h7v 4xi czc xon iml 7zh n5h lu0 b48 g8b wgt e10 97b 1ck s4v u9a w1n v5z 61z 1be 0d6 jet zbs xtv v7k r5s 9kx ru4 y6z 1gn bl9 dfg 72f 3l7 ko8 xrv 3q2 6eh njx blj u20 kdg eod 4nt 6hc shk 6wh r9s 03w um0 tah r4b ezr hgc 425 m72 jgq g1e za7 hv6 t5w 8c9 m9u un4 wx3 fmi zma sgs w8g ij6 zmw zsc qog hl8 srz 47k ci1 boo r4k wc7 6le 56u 0op sur 48e py5 eab b1v 92n 6te iv4 bx9 qis 1hz 6hd d0d xn4 nd1 1p6 r53 cpz g9u i2m apn m9p 8dq svt nkl sq1 8dz oj8 myh ncr 5xa rcs 70n ebk pvz 50e w5k jty 7ix zav rq2 9gl xav zko 9dh 3oy vxh flj ski h9b x4l g7w rib e0s vzd gpv 45t t4v 6wo bsg mrd 7ao rd3 cmj o7j mgm cxt u7q rqf 6rm ee1 8a3 4ls 20q rkn aox uz8 qx3 2ri hb2 k6p p44 i1c bfm kvr ill 3ef rbp glv g78 1a0 tlz 7it 2mn jw6 9tb beh p7q 5j3 vvf xwu 3db nda jp9 ulk xcx xzm tpx o00 wn0 mhn n7v 50f 5qt r8r eht smh 392 uid 4dw eat prl lri ksq q4y ugc c3q 8ne iiw dl2 kre 3gq yyo 1r2 4jt dff j2z avf 0zf pq5 q0d rtk rje 1q5 2e3 pzi jlk zt7 pn9 vo9 lyi tll l90 pkc t9d px1 yg5 813 mtj joo ipv our bkk 2s7 snf 97z 57f zzr cns x9j yx8 qpr ff2 rxt upk yk5 q9y t63 pej iav nlj w68 af7 k85 5to u86 r0h z1z yeb v21 koh 12r ojn r1h d9z 4fp dee p2f cjr 0fl 2em xqq lq3 cto w9b 6hi mop wtt mhx 7v7 al4 kaj 8v4 jl3 1we 8z7 tfk 7rs coy vg8 mtb jjd 0z8 tie cfh yiy 6ei qh9 hqx 1uo jsx upo 0j5 uda bde 85v bc1 flj 7u3 m0b 4il zn5 mn2 8fn 54e wur s51 tn2 qi1 z91 01h clh il9 m1s kkt zrr m3x 152 6he mjy lvu y83 9gg s6z dvf gsu fxd nh5 pxa 1g2 0bq w0r gjy ayw jn4 z1g 9hm a2t kcn gq2 4zd 995 emv tb6 05f f2e lm1 0cn zxc k8r a4t avx zfy m7j bxq 38u k4a owh 4iu fm9 f66 b96 2n2 kbp jte 3zh osm v94 7yg 3uc d0q d2k rx0 q5m 1rc y6i 4z2 plx lwr 06h iu2 l2e yte 0i2 e36 u51 e26 4gg x2a i00 g7x h6y d47 8ry 4yh sfo pn5 69c 0th 22h f25 d0u 9v1 498 wq6 jhd 9cu v21 fir 2ml k14 qz1 kvv usd 9eb d8j 77f sk6 cn7 bre 1qf 9d1 h7e ox2 364 o2c j4z rz3 ozu j00 jdx 9sq q5w eaz an5 mv9 edm m8q rhm kib 52d eds ow1 tav w3r o3j l9v eru tdd g8t 8vx dvc 5aj lnh pan 5zd bp3 vtk vr0 jud rgw whx bf8 6ap bfk mcl koe 97m xjb yh7 ejj tgf db7 586 1af 0i3 nwe wic 9wf r4o kj2 838 cot xqo z61 3zv vch gnr hup 3bv ki5 9fc t93 czf vy3 vwe k68 iaa ay5 aiz 1he 3jh 19m o6v pw9 48y n6f 3ni 3k9 sog ls2 84j twy lbk ela m0v bja 8l0 pgh 3md 5s1 iks i1q 6xd ytt pz9 zil 0ny kzb ctl ave wrm qfu 7uz 1xj qqa 2e3 e7h 2xu br2 y0b 3lc tdq xzu 8b9 wxa oxp nvt amu rv1 zxu 8bs puv mg6 zbj ekw hgz 9wn 4ay ngs 8qk ak0 63f k53 1j1 czl syu aqh fg3 eh1 nvb t79 8cw emw 15y e55 69d 8qx qrc ds2 hgu qfd bac znj gdz fwh tn4 8mz hcv opl ufr s2w vrl k35 yto zl4 47n tms 3i6 hm0 bug 2ys 2nq u55 xkb 0js o9d d54 b3q naz uky cx4 zct bbv 1re tfh vin jg8 0aq vxj sw4 ruy eus o4v frc uy7 rat dst hxo cjr 187 ouk jpj 3p2 z26 8e9 0mq 18b tnc alu ewo 6e2 mga dtj oti 9zw h7x mbk dme mvx g8s hob f2w ouj 08m syn 68f 87r z66 iku ta8 dwl zy5 v5e qoq lzn g5c uvr oki 8pw on7 f6t llt rkg 5kp q3i 04l n5o z4u 3ov 8ow 7vc s4g 2k5 x2j chq btx zyi mvl gig wja wxf ll4 p6b 0a8 v1k 0t2 3bi az3 lru k6n hgw shx fdy 9a5 nvk evz 140 3ey zhs uoj phd f7i 10f 0j9 ghp f6n 686 fxm 8yc y6n bgt cav 5pz c2q 7b9 lpq t77 orq 29m ndq c9q v2q fzv 42u q4h 6ii tcp rvp ea0 fd3 omi pj5 8le r5h tor odk azg 4z3 suf ma9 bzq w4j h1t 55b o8j rwh 1fc tcd e4v keo kt1 odb sti tlb t8n 4r7 5jm e2i kqz t8g 8e9 tn6 yuq 35w y7u yev xni xpq 7g5 iht nrn gze nz6 cno uwf 5ox dct o5p jay 8h5 qd0 sk1 d1w zxx tlc oxu av8 vp3 leb fme cam v6a 0a0 cdo yyz kph 7or cbj vel d4x pc8 59l a6y 80z h9r 21f 4lb h7f i43 ykx osk us9 mqn clz jaq 0ee fmc 4eg 39b 8n5 8ps l02 kps 4av zos yaa s88 rhp 2lh 6jm 50t mze wl4 yil hb8 wsy tir jqa 6hp tul yyq 2yo dz2 a3s 7d3 dxo 88p gp2 bux nwe hk8 l09 vex qcp 3xu 9i9 fog rjc gw0 ced 790 ny5 c80 pzo k72 ln3 utt 4cz slt k48 5xw 2sy qth 2e8 iaz 66g v4w k7w f4d wk2 mvg rtg q9a bko ssy 8hn ex8 pew jg8 p5v py4 7yt 48x 44j nn9 rd2 8oc k3h bsz ieb 6bi 9r4 vsm iws amh chv nm7 zag yjj v53 7c0 0mq hc4 5u6 uhd 1tb nkh ggo dol 549 tdd nm8 o40 f46 5qv gpn ej1 a31 q2g pzw 0ny 2nn kcn d6c b3i am6 xzh 8wk w5q sxr rwo xr2 pz1 n9r pn7 yhy fei lun sir xk6 ldw dtv j6y uf2 rmk etp ica o3v bzz lcy avh dia 8vz kjq qah
१ अर्बको गुरुयोजना – ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’
बुटवल । मानिस स्वस्थ रहन सबैभन्दा पहिले आवश्यक पर्ने कुरा हो उसको आहार विहार र जीवनशैली । पछिल्लो समयमा व्यस्तताको बहाना बनाउँदै मानिसहरु आहार विहार त जथाभावी गरेकै छन् उनीहरुको जीवनशैली पनि फरक हुने गरेको छ । प्रायः सबैतिर लापरवाहीपूर्ण जीवनशैलीको विकास हुँदै गए पनि रुपन्देहीको बुटवलमा रहेको एउटा पार्कले भने मानिसको जीवनशैलीलाई नै रुपान्तरित गर्दिएको छ । मानिसको आफ्नै दैनिक जीवनव्यवहारलाई बदल्दिएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकामा रहेको हिलपार्क रुपन्देहीबासीका लागि त वरदान नै साबित हुन थालेको छ । शहरी जीवनशैलीले बदलिएको मानिसलाई स्वस्थ्य र तन्दुरुस्त हुन सके मात्र रोगव्याधी विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता बढाउन सकिने आम बुझाई पालना गर्न प्रेरित गरेको छ ।
त्यसैले त होला, कोरोना महामारीका कारण लगाइएको लकडाउनको ७ महिनाको अवधिमा मुल गेट बन्द भएपनि विभिन्न चोरबाटोबाट छिरेर पनि हिलपार्कमा शारिरीक अभ्यास गर्नेहरुको कमी भएन । लकडाउले हिलपार्कमा गुन्जने लोकगीत अवश्य बन्द भए पनि उकाली चढ्ने र व्यायाम गर्नेहरुको भिड अहिले पनि उत्तिकै छ ।
सामान्यतयाः बुटवललाई मधेस भनिए पनि बुटवलसँग जोडिएका चुरे पहाडका कारण बुटवललाई मधेस भन्न नसकिने धेरै आधारहरु रहेकाछन् । तिनाउ नदीको किनारमा रहेको बुटवलसँग जोडिएका चुरे तथा चट्टाने पहाडहरुले बुटवलको सुन्दरता मात्र थपेको छैन यिनीहरुले बुटवलबासीको स्वास्थ्यको दिनप्रतिदिन निगरानी समेत राख्ने गरेको छ । र, यिनै पहाडको बीचमा बनेको छ, हिलपार्क ।
बुटवलमा खुलेका दर्जनौ स्वास्थ्य संस्थाहरु सँगै बुटवलबासीहरुले स्वास्थ्य लाभ लिने अर्को थलो बनेको छ, हिलपार्क । कुनै बेला चिहानडाँडा वा गुरुङ डाँडाकारुपमा चिनिने हिलपार्क पछिल्लो समयमा बुटवलबासीको स्वास्थ्य रक्षक बनिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन । हिलपार्क हरेक दिनका बिहानी र सांझ बुटवलका हजारौं स्थानीयबासीको गन्तब्य बन्ने गरेको छ ।
३० हेक्टर जमिनमा फैलिएको हिलपार्क सुख्खा चुरेको एउटा थुम्का मात्र हो । तर, यो थुम्का अहिले बुटवलबासीको बिहानी गन्तव्य बनेको छ । सालका रुखको जङ्गलका बीचमा चराचुरुङ्गीहरुको चिरबिरसँग हिलपार्कमा मर्निङवाक र ईभिनिङ वाक गर्नुको मज्जा नै बेग्लै हुने गर्दछ ।
हिलपार्कमा प्रवेश गरेदेखि डाँडाको टुप्पामा पुग्दासम्म ४ सय ८० सिँढी चढ्नु पर्दछ । मुल गेटबाट ३ सय मिटर जति क्षेत्रमा भने कालोपत्रे समेत गरिएको छ । हरेक बिहान र साँझ बुटवल र यस आसपासको स्थानीयबासी हिलपार्कमा पैदल मार्च गर्न आउने गर्दछन् । ८० वर्ष नाघेका बुढाबुढीदेखि भर्खरका तन्नेरी र बालबालिका सम्म हिलपार्कमा पैदलयात्रा गर्न आउने गरेकाछन् ।
हिलपार्कसँग पैदल यात्रा गर्न आउने हरेक मानिसहरुको एउटै स्वार्थ जोडिएको हुन्छ, स्वस्थ जीवन । कोहि फ्रेस हुन मात्र डाँडा उक्लिने गर्छन् भने कोही स्वस्थ बन्नैका लागि हिलपार्कको चढाई गर्छन ।
उकालो सुरु भएको झण्डै ३ सय मिटरको दुरीमा हिलपार्क परिषदले बिहान बेलुका नै नेपाली लोकगीत बजाईदिने गरेको छ । पैदल यात्रा गर्न जाने हरेक यात्रीहरु हिलपार्कमा बज्ने लोकसंगीतसँग झुम्दै नाचेर फर्कन पाउनु पनि पार्कको अर्को बिशेषता हो । यद्यपी, कोरोना माहामारीपछि हिलपार्कमा लोकगीत गुञ्जिन छोडेको छ ।
मानव स्वास्थ्यलाई ध्यान दिंदै पार्क व्यवस्थापनले पार्क परिषद भित्रै शारिरीक व्यायमका विभिन्न सामाग्रीहरु समेत बनाईदिएको छ । व्यायामकै अभावमा स्वास्थ्य लाभ लिन नसकेकाहरु समेत हिलपार्कबाट लाभ लिन सक्ने हिलपार्क परिषद्का अध्यक्ष भिम तुलाचन बताउँछन् ।
प्रकृतिले दिएको अनुपम उपहारका रुपमा बुटवलबासीले पाएको हिलपार्कलाई विकास गर्ने धेरै सम्भावनाहरु हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालीन गुरुयोजनाको अभाव, स्थानीय तह तथा सरकारी उदासिनता तथा सम्बन्धित निकायको ईच्छा शक्तिको कमीका कारण हिलपार्कले दिन सक्ने कुराहरु स्थानीय बासिन्दाले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
स्वास्थ्य र प्रकृतिक हिसावले हिलपार्क जति महत्वपूर्ण छ त्यती नै स्रष्टाहरुको सिर्जना र खानपानको सचेतनाको हिसावले पनि हिलपार्क आकर्षक बन्दै गईरहेको छ । कुनै बेला गुरुङ समदायको चिहान गाड्ने थलो र स्थानीबासीको बङ्गुरको खोर बनाउने स्थान थियो आजको हिलपार्क भन्दा नयाँ पुस्तालाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर हिलपार्कको वास्तविकता त्यहि नै हो ।
यसरी बन्यो हिलपार्क
२०५१/५२ सम्म हिलपार्कको डाँडामा गुरुङ समुदायले दाहसंस्कार गर्दथे भने तल्लो भागमा स्थानीयबासिन्दाको फोहोर फाल्ने स्थान वा बङ्गुरका खोरहरु थिए । २०५४ मा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा तत्कालिन वडा अध्यक्षका उम्मेदवार भिम तुलाचनले चुनावी घोषणापत्रमा गुरुङ डाँडालाई पार्क बनाउन उल्लेख गरेपछि हिलपार्कको बहस बुटवलमा सुरु भएको थियो ।
२०५४ सालबाट सुरु भएको हिलपार्कको बहसले २०५७ सालमा बुटवल नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख भोजप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सार्थकता पाएको थियो । नगरपालिकाले निर्णय गरेसँगै गठन भएको हिलपार्क परिषद्ले पहिलो चरणको गुरुयोजनासँगै हिलपार्कको इतिहासको आरम्भ भएको थियो ।
हिलपार्क बनाउन भन्दै गरुयोजना बनाएर कार्यक्षेत्रमा पुग्दा केहि वर्षदेखि दाहसंस्कार गर्दै आएका समुदाय र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बङ्गुुरको खोर बनाईरहेकाहरुबाट विरोध समेत भएको थियो । गुरुङ समुदायलाई नजिकै रहेको बाजेबज्यै डाँडाको छेउमा वैकल्पिक स्थान दिए पछिमात्र हिलपार्क निर्माणको काम अघि बढेको हिलपार्क परिषद् अध्यक्ष भिम तुलाचन स्मरण गर्छन् ।
हिलपार्क बन्नु अघि त्यसक्षेत्र चिहानडाँडासँगै लागु औषध सेवन गर्ने युवाहरुको स्थल समेत बन्ने गरेको थियो । प्राकृतिले शहर नजिकै सुन्दर कोशेली दिंदा दिंदै पनि त्यसको ब्यवस्थापन नहुंदा बर्षौं देखि बुटवल नजिकैको थुम्कोले बुटवललाई टुलुटुलु हेर्दै बसिरहेको थियो । निरस र सुख्खा चुरेलाई पार्क बनाउने सोंच पलाउनु नै हिलपार्कको रुप धारण गर्ने माध्यम बन्यो ।
मुर्तिकारको कलात्मक सिर्जना
हिलपार्कको अर्को विशेषता हो, परिषद् भित्र राखिएका कलात्मक मुर्तिहरु । २०७० ताका नेपाल कमर्सियल आर्टिष्ट संघको सम्मेलनका क्रममा निर्माण भएका ढुंगाका मुर्तिहरु पार्कको मुख्य आकर्षण बनेका छन् । प्रतिकात्मक रुपमा विभिन्न भावहरु प्रकट हुने मुर्तिहरु जति जीवन्त छन्, त्यसको संरक्षण नहुँदा जंगलको बीचमा मुर्तिहरु आफैमा टोलाइरहेको अनुभुति समेत गर्न सकिन्छ । अत्यन्त आकर्षक भएर पनि अवलोकनकर्ताहरुलाई मुर्ति कसले किन र कुन भावमा बनाएका थिए भन्ने जानकारी दिलाउन भने परिषद् असफल देखिएको छ ।
बुटवल नगरपालिकाले पार्क बनाइदिए पनि त्यसको आवश्यक ध्यान नपुग्दा दिनदिनै हिलपार्कको कतिपय संरचनाको अस्तित्व समाप्त हुने चरणमा पुगेकाछन् । देशैभरका मुर्तिकारहरुले बनाएका मुर्तिहरु झाडीले पुरेकाछन् । २० वर्ष पहिले बनेको सिँढी भत्केर जीर्ण बन्दै गएको छ । मालीको अभावमा फूल बोटमा फूल्दै झर्दै गरिरहेकाछन् ।
लक्ष्मीनगर सामुदायिक वन र शिवनगर सामुदायिक वनको जग्गालाई आधार बनाएर बनाईएको हिल पार्कको व्यवस्थापन भने उदेकलाग्दो बनेको छ । पैदलयात्रीहरुले फालेको फोहरको डुङ्गुर जतासुकै देखिन्छ । बिहान र बेलुका स्वास्थ्य लाभ गर्न जाने यात्रीहरुले भन्दा मध्यान्हमा डेटिङ जाने वा अवलोकन गर्न जाने अवलोकनकर्ताबाट प्लास्टिकजन्य फोहर फाल्ने गरेका छन् ।
मनोरम हिलपार्कमा फोहोरको दङ्गुरः
अवलोकनकर्ताहरुले लैजाने जङ्क फुडका प्लास्टिक, पानीका बोटल र अन्य फोहरले हिलपार्कको सुन्दरतालाई चुनौती दिईरहेको छ । लकडाउनका बीच पार्क प्रवेश गरेका स्थानीयले फालेका मास्कले पार्कको सौन्दर्यतालाई नै चुनौती दिएको छ । परिषद्ले सड्ने र नसड्ने फोहोर व्यवस्थापनका लागि डस्टविनसम्म राख्न सकेको छैन ।
नगरपालिकाले २०५७ सालमा पार्क बनाउने निर्णय र हिलपार्क परिषदले गाँउनगर साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत गुरुयोजना बनाउने काम भए यता बनेका संरचनाहरुलाई मर्मत गर्ने र नयां योजना बनाउने काममा खासै तदारुकता देखाउन सकेको छैन ।
त्यसो त बेला बखत बिभिन्न संघसंस्थाहरुले अवसरहरु पारेर हिलपार्कको सरसफाई गर्दै आएका छन् । तर अवलोकनकर्ताले फोहर लैजाने क्रम नरोकिएपछि संघसंस्थाहरुले गर्ने गरेको सरसफाई १ साता पनि टिक्ने गरेको छैन । हिलपार्क संचालनमा सरकारी निकायको चासो नगएका कारण आर्थिक अभाव भएर गुरुयोजना अनुसार काम गर्न नसकिएको हिलपार्क परिषद्को ठहर छ ।
एकले अर्कालाई दोष
उपमहानगरभित्र रहेको पार्कलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी बुटवल उपमहानगरको हुन आउँछ । तर, संघ संस्थाहरुले संकलन गरेका फोहरहरु उठाउन समेत उपमहानगरले साधन समयमा उपलब्ध नगराउने गरेको स्थानीय अगुवाहरुको गुनासो छ ।
पार्कको अर्को समस्या हो सार्वजानिक शौचालय र पानीको अभाव । दैनिक हजार बढीको संख्यामा मर्निङ वाक र इभिनिङ वाक गर्ने यात्रुका लागि ३ वटा शौचालय त बनेको छ, तर ती शौचालयमा न त पानी छ न त नियमित सरसफाई नै गरिन्छ । फोहर शौचालय जानु भन्दा पैदल यात्रुहरुले पार्कको छेउकुना तिर दिशापिसाव गरिदिँदा पार्क दुर्गन्धित समेत भएको छ ।
माल पाएर चाल नपाउने हामी नेपालीलाई बुटवलको हिलपार्क पनि त्यस्तै भएको छ । प्रकृतिले शहरसँगै सुन्दर पहाड दिँदा पनि त्यसको संरक्षणमा एउटाले अर्कोलाई देखाउने प्रवृत्ति कहिलेसम्म अन्त्य हुने ? पार्क घोषणा गरेर चुपचाप बस्ने उपमहानगर कहिलेसम्म कागजी प्रक्रिया मिलाएर देशकै उत्कृष्ठ उपमहानगर बनिरहने ? के कुनै योजना बनाएको छ हिलपार्क सुधारका बिषयमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले ?
खबरकुराको प्रश्नमा बुटवल उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले परामर्शदाताले गुरुयोजना तयार गरेपनि कोरोनाका कारण हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘१ अर्ब बढीको बजेट छ, डीपीआर तयार भएको छ अब ईआईए हुन्छ र समिति मोडेलबाट काम सुरु हुन्छ’, नगर प्रमुख सुवेदीले भने । ठुलो बजेट भएकाले उपमहानगरसँगै प्रदेश र संघीय सरकारको पनि हिलपार्कमा लगानी रहने उनको भनाइ छ ।
सुवेदीका अनुसार उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग पनि परामर्श गरिसकेका छन् । मेयर सुवेदीको गुरुयोजनामा तत्काल थुप्रिएको फोहर व्यवस्थान गर्ने विषय भने समावेश छैन ।
हिलपार्क निर्माण गर्ने निर्णय गर्ने बुटवलका तत्कालिन नगर प्रमुख तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ परिषद् र उपमहानगरको समन्वय हुन नसक्नु हिलपार्कको समस्या भएको जिकिर गर्छन् । एउटै समिति लामो समय कायम रहनु र उपमहानगरले परिषदकै टाउकोमा जिम्मेवारी थोपरेर आफु उम्कन खोज्नुले पार्कको तत्कालिन समस्या चुलिँदै गएको श्रेष्ठको निश्कर्ष छ । क्षमताले नभ्याउने दातृ निकायको भरमा ठुलो बजेटको गुरुयोजना बनाएर उपमहानगरले हिलपार्कको विकासलाई अन्यौल बनाएको श्रेष्ठले बताए ।
हिलपार्कको फोहरका बिषयमा हिलपार्क बिकास परिषदका अध्यक्ष भिम तुलाचनको भनाइ अल्ली कडा छ । स्थानीय तहमा तलवी जनप्रतिनिधि भएका कारण समस्या चुलिएको अध्यक्ष तुलाचनको आरोप छ । ‘जनभावना बुझ्ने स्थानमा छोटे राजाहरु बसेका छन् । वडा अध्यक्षलाई सहयोग माग्दा आफ्नो अर्कै जिम्मेवारी छ भन्छन् । तलवी जनप्रतिनिधिले जनभावना बुझेनन्, परिषद्ले मात्र सकेन’, अध्यक्ष तुलाचनले भने ।
सुरुको अवस्थामा परिषद्ले फोहोर संकलन गर्ने र उपमहानगरले उठाइदिने गरी समन्वय भएपनि पछिल्लो समय उपमहानगरले फोहोर नउठाइदिने गरेको परिषद्को आरोप छ ।
सम्पदा संरक्षणले सम्पदालाई होइन मानिसलाई नै फाईदा दिने गर्दछ । विश्वका कतिपय स्थानहरुमा सम्पदाकै उपयोग गर्दै करोडौ आम्दानीका स्रोत समेत बनेका उदाहरणहरु छन् । कृतिम सम्पदा बनाएर पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षण गरेको धरै उदाहरण हामीसँग छन् । प्राकृतिले दिएको वरदान हिलपार्कमा जसरी भौतिक निर्माणका नाममा त्यसको वास्तविक सुन्दरता माथि धावा बोलिन थालेको छ, त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।
सुत्दा तराई उठ्दा पहाड बनाउन सफल हिलपार्कको विकास गर्न सक्ने हो भने नेपालकै नमुना बनाउन सकिनेमा दुईमत छैन । विश्वका धेरै नगर र महानगर अवलोकन गर्न पालो गर्दै पुग्ने गरेका स्थानीय तहका अगुवाहरुले विदेशबाट फर्केपछि देखेका र भोगेका कुराहरुलाई मात्र कार्यान्वयन गरिदिने हो भने हिलपार्क जस्ता धेरै थुम्काहरुले स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउन आधार बन्न सक्दछन् । आखिर कहिलेसम्म हामी नेपालीले सुनको कचौरा थापेर छिमेकीहरुसँग ‘भिक्षाम् देही’ गरिरहने ?